Esi mee ka ezigbo Spaghetti Carbonara | Otu Di na Nwunye
April 3, 2019 / Ahapụ a Comment
Carbonara bụ eleghị anya na efere Ịtali kacha amasị m, ọ bụ n'etiti otu n'ime Tracy's. Ọ bụ creamy, ọgaranya, na ihe ijuanya dị mfe na oge nke oge eji na prep, ihe ndị metụtara, na usoro nri.
A kụziiri anyị otú e si eji efere a Na-eri nri Milanese, ya mere, anyị nwere ike ịgwa gị aka otu esi eche ya, na ihe dị mkpa, otu esi ebibi ezigbo carbonara.
Kedu ihe nzuzo?
Do ọ bụghị jiri ude. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị American Italian ga-eme ka ihe a dị ka kọfị kọfị 90% nke oge na-agba mbọ ịme "ọgaranya", mana ọgaranya dị na abụba nke guanciale / anụ ezi tinyere egg yolks.
Fat = Creamy = Rich = Awesome. Iwu m ga-ebi, enyi m ...
Ozokwa, ọ na-atọ ụtọ nke ọma iji ụdị ọ bụla nke cheese "parmesan" na-aga, na-agagharị ma nweta ihe dị mma - Parmigiano Reggiano. Nke a na-eri efere mara mma nke ị nwere ike ime n'ụlọ, ma mee ka ọ bụrụ ezigbo ndị Ịtali.
Iji mee ka ihe oriri na-esi ísì ụtọ ruo ogologo oge, kpoo nnukwu efere (na efere ndị na-efe efe). Itinye spaghetti na obere mmiri na - emepụta mmiri nke na - eme ka mmiri na - agwụ ike, nke na - enye aka n'ịmepụta ọgaranya.
Oge nri20 mins
Oge zuru ezu30 mins
N'ezie: Isi akwukwo
3 oz guanciale ma ọ bụ 4 anụ ezi bee n'ime ½ "iberibe
¼ Iko mmiri
2 garlic cloves mpi
¾ Iko Pecorino Romano ma ọ bụ cheese Parmesan grated
2 akwa buru ibu tinyere 2 nnukwu yolks
½ teaspoon ose
½ teaspoon nnu
Weta anụ ezi / guancial na mmiri iji kpoo na 10 "sket skillet n'elu usoro okpomọkụ; esi nri ruo mgbe mmiri na-ekpochapu na anụ malitere ịmalite, banyere 8 nkeji.
Belata okpomọkụ na ọkara-ala ma na-anọgide na-esi nri ruo mgbe abụba na abụba na-acha uhie uhie, 5 ka 8 nkeji gafere.
Tinye garlic na esi nri, na-echegharị mgbe niile, ruo mgbe o siri ísì, banyere 30 sekọnd. Idebe 1½ teaspoons nke abụba na okpukpu ọkụ, ọkara ọkara, gbanyụọ nsị anụ ahụ wee wepụ ya. Whisk ke cheese, àkwá na nkochi ime akwa, na ose.
Nri spaghetti dịka ntụziaka ngwugwu na-eji naanị 2 iko mmiri na ½ teaspoon nnu weere, wee debe ½ iko nke mmiri mmiri na-agba oyi (tụfuo ndị ọzọ).
Tinye spaghetti a na-esi nri na efere ọzọ.
Jiri nwayọọ hichaa ¼ iko nke mmiri na-edozi n'ime mmiri nchịkọta cheese. Ọ bụrụ na àkwá amalite ịsa nri ma kụziere ntakịrị, jiri sieve jiri nwayọọ wụsa ya na spaghetti, ịkwanye uwe.
Tinye nchịkọta anụ ezi-garlic ma gbanye ya ka ejikọta ya, ma hapụ ya ka ọ zuru ike, na-agbagharị ugboro ugboro, ruo mgbe ihe oriri na-eme ka ubé na mkpuchi niile spaghetti, 2 gaa na 4 nkeji.
Welie spaghetti a na-ekpuchi ihe ọ bụla na-esi na ya pụta na nnukwu efere na eriri aka na-efe efe, na-ewepụta anụ ezi ọ bụla site na nnukwu efere.
Na-eje ozi ozugbo.
Na-ele anya ịga njem Ịtali? Hụ na ị ga-elele akwụkwọ ozi Ịtali iji mepụta zuru njem Ịtali maka gị!
Category: Europe, Nri na ihe ọṅụṅụ, Italian, Italy, Isi akwukwo, Ezi ntụziaka Tags: carbonara, Italian, Italy, uzommeputa
← Ihe Ndị Rom Na-eme Na Rom N'abalị
Borghese osisi: The Masterpieces Of Bernini And Caravaggio →